अपांगता भएकै आधारमा अयोग्य भन्न मिल्छ? :: सौरव कार्की :: Setopati
हामी अपांगता भएको व्यक्तिहरुलाई साधारण जीवनयापनदेखि पढाइ, जागिर अनि सम्बन्ध गाँस्न सबैमा उत्तिकै चुनौतीका पहाडहरु ठडिएका छन्। शैक्षिक योग्यता हुँदाहुँदै पनि हामी अपांगता भएको व्यक्तिले कुनै पनि निकाय/संस्थामा रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा सुरुमै 'अयोग्य' घोषित गरिन्छ।
प्रायः संस्थाहरुमा 'अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च रुपमा प्रोत्साहन गरिन्छ' भनेर लेखिएको भेटिए पनि यो कुरा कागजमै सीमित छ। मैले पनि कति धेरै ठाउँमा आवेदन दिएँ तर, शारीरिक रुपमा अपांगता भएको कारण सुरुमै 'अयोग्य' ठहर गरिन्छ।
हाम्रो अधिकारको निम्ति लड्ने संगठन नभएको पनि होइन। तर के गर्नु त्यहाँ पनि पार्टीको झन्डा बोकेर बस्ने मात्र छन्। मैले बिबिएमा अध्ययन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा धेरैचोटि बाबालाई लिएर 'राष्ट्रिय अपांग महासंघ' धाएको थिएँ। तर कहिल्यै पनि मेरो लागि वकालत गर्न गएनन्, महासंघ प्रतिनिधिहरु।
अब सोच्नुस् अपांगता हितको लागि काम गर्छ कि राजनीतिक स्वार्थको लागि। महासंघको चुनाव हुने बेला राजनितिक पार्टीको झन्डा बोकेर चुनाव प्रचार-प्रसार हुन्छ। मैले पनि अफिसरको लागि 'राष्ट्रिय अपांग महासंघ' आवेदन नदिएको होइन। तर त्यहाँ पनि पार्टीगत सिफारिस नहुँदा रोजगारीका अवसर पाइएन।
कहिलेसम्म अपांगता भएको व्यक्तिहरुको पनि वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व देख्न पाइएला? यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेपाल बैंकर्स एसोसियसन, बैंकहरु, अनि अपांगता भएको व्यक्तिहरुको हक-अधिकारको निम्ति लड्ने छाता संगठन 'राष्ट्रिय अपांग महासंघ' गम्भीरता साथ अध्ययन गरेर नीति निर्माण गरी कार्यन्व्यन गर्न अत्यन्त जरुरी छ।
विश्वप्रसिद्ध भौतिकशास्त्री स्टिफेन विलियम हकिङको एउटा भनाइले यी बेथितिहरुबीच पनि मलाई ऊर्जावान राखिरहेछ 'मेरो सल्लाह अरु डिसेबल्ड मानिसहरूलाई के हुनेछ भने, यस्ता विषय र चिजहरुमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, जसलाई तपाईंको अक्षमताले रोक्दैन, जुन कामलाई तपाईंले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको शारीरिक अक्षमताले हस्तक्षेप गर्ने चिज या कार्यहरुप्रति पश्चताप नगर्नुहोस्। तपाईं आत्माबाट असक्षम हुनुहुँदैन न त शरीरबाट नै।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८, ०४:१८:४१